“…Qoricha qabbaneessaa itti ergi maaloo…” – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
January 30, 2020 /in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
Fakkii Ayyaana Astari’iiyoo (Mul’annaa)
Dn. Abbaaynah Kaasee
Yaa Giiftii keenya Maariyaam nama hubateef waan kee ajaa’ibaa ajaa’iba caalu dha. Boqannaan kees akkasuma. ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም የዐጽብ ለኵሉ; duuti nama du’uuf ni mijata/ni ta’as; duuti Giiftii keenyaa garuu nama hunda dinqisiisa. Jireenya bara baraa namaa laattee ati garuu ni duuta. Sababa keetiin Waaqa Ilmaa si’a sadi arganna. Jalqaba, gaafa Isa deesse, itti aanee boqannaa keen fi inni sadaffaan immoo gaafa Du’aa ka’uumsaa waara du’aniitti dha.
Oduun boqannaa kee Ayyaana keenya dha. Duuti akka nusodaatuuf fi nutis du’a akka hin sodaanne ati sababa keenya dha. Cubbuu keenyaafi araara argachuufis sima abdanna. Ati bar Harmee keenya dha.
Biyya keenyaaf, bakka maqaan kee osoo itti hin waamamiin hin oolle kanaaf qoricha qabbaneessaa itti ergi maaloo!
Baga Ayyaana Astariyoo Maariyaamiif nuun gahe.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2020-01-30 11:29:102020-01-30 11:29:17“…Qoricha qabbaneessaa itti ergi maaloo…”
Aduun Sambata guddaa (Dilbatni) guyyaa soomaa ta’uu isaa isin beeksis... YAA’II JI’AA KUTAA AFAAN OROMOO